Sebenzisa ummeleli ku-Chromium / Chrome | Kusuka kuLinux
Sebenzisa ummeleli ku-Chromium / Chrome
Chromium njenganoma isiphi isiphequluli esizihloniphayo, ungasebenzisa i- Ummeleli Wesistimu uma kufanele sisebenzise eyodwa ukuzulazula.
Inkinga iza lapho siyisebenzisa ezindaweni zedeskithophu njenge I-LXDE o Xfce, abangenayo inketho yokusebenzisa ifayela le- Ummeleli Womhlaba Wonke. Ukusetshenziswa kwe Ummeleli en Chromium kulula njengokufaka ukuphela:
Kepha kungaba yisidina kakhulu ukukwenza lokhu njalo lapho sihamba ngomkhumbi. Ngakho-ke isixazululo esisheshayo ukuhlela ifayela: /usr/share/applications/chromium.desktop. Sifuna umugqa othi:
Futhi siyifaka esikhundleni sayo:
Lokho kufanele kwanele. Singasebenzisa futhi Ummeleli Sock uma sisebenzisa umugqa:
Ungaba nemininingwane eminingi ku le webhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Sebenzisa ummeleli ku-Chromium / Chrome
Lokhu ngeke kube lula?:
Angazi, okokuqala ngoba anginakho ukufinyelela, futhi okwesibili ngoba kubonakala kimi ukuthi sikhuluma ngezinto ezahlukahlukene.
Kuyisayithi lapho uthola khona amawebhusayithi amaningi, ungawahlukanisa noma ngabe ufuna kanjani, ngezwe, isizinda, njll.
Uchofoza kokungafani kwewebhu bese bekuthumela kwelinye ikhasi lapho uthola khona ibha efana naleyo yenjini yokusesha, lapho ufaka khona ikheli lewebhu futhi usuvele unommeleli
Bengicabanga ukuthi, asikhulumi ngento efanayo. Ake ngichaze, uma ngingasebenzisi ummeleli, angikwazi ukuzulazula. Amabhizinisi ayisebenzisa kakhulu, amanye awaziwa, kodwa ayayisebenzisa. Uma ngingacacisi ummeleli (okwami ​​okuqinisekisa ngokumelene nama-ISP wami) angikwazi ukufinyelela ku-inthanethi. Ngakho-ke, uma kwenzeka ngikwazi ukufinyelela, uma ngingafaki ummeleli, angikwazi ukungena kusayithi ophawula ngalo.
Ah, ngakho-ke labo obasebenzisayo abagcinanga ukungaziwa
Cha, akunjalo .. Ngikhuluma nge-Cache Proxy, hhayi ama-Proxies angaziwa .. 😀
Isigaxa seGuido kusho
idatha enhle kakhulu, kwenzekeni kimi ngishintsha amaseva we-proxy, lokhu kuhle
Phendula uGuido Rolon
Ngiyabonga, kungisizile, ikakhulukazi ngoba bengifuna ukuyisebenzisa ngamasokisi5 asuka eNyuvesi yami enza umhubhe oya ekhaya.
Ngizoyivivinya, kepha nakanjani izokwenza!
Ngithanda iManjaro Linux, kubuhlungu ukuthi umkhawulokudonsa wami ulunge kakhulu (ama-64 k / s) kepha uxhumano lungaphansi kwe-1k / s
UDasht Alejandro Sandín Vargas kusho
futhi uma kwenzeka udinga ukufaka okwehlukile kommeleli kwamakheli wendawo?
kungaba kanjani into?
Phendula kuDasht Alejandro Sandín Vargas
Kulungiswe inkinga ngokukhishwa kommeleli
Nansi into (isixazululo)
ekugcineni kwalayini (inkambiso)
i-chromium-browser-proxy-server = »http: // iseva: 1080 ″
engeza -no-proxy-server = »ummeleli ngaphandle»
isiphequluli se-chromium% U-proxy-server = »http: // proxy: port» –no-proxy-server = localhost, *. domain.cu
uma kwenzeka idinga Umsebenzisi ne-PASS kungaba njalo
isiphequluli se-chromium% U-proxy-server = »http: // igama lomsebenzisi: iphasiwedi @ proxy: port» –no-proxy-server = localhost, *. domain.cu
Okokufundisa ukumisa i-proxy cache noma i-vpn tunnel kuyasiza kakhulu.
Uma sikuhlanganisa nokusetshenziswa kwama-proxies wangasese angaziwa sizophepha kakhulu, nsuku zonke kufanele sikuthathe ngokungathí sina ukunakekela ubumfihlo kwinethiwekhi.
I-Windows 8: IMicrosoft izozama ukuvimbela ama-boot amabili nge-Linux